1. ခရစ်စမတ်၊ ဆောင်းရာသီအေးလွန်းသည့်နှစ်၏အဆုံး၌ရွှင်လန်းဖွယ်ရာသီ။ ဒီနေ့မှာအချိုပွဲမီနူးရှိတယ်။ ယင်းကကျွန်ုပ်တို့ချစ်သောမိသားစုတွင်ပျော်ရွှင်မှု၊ ပျော်ရွှင်မှုနှင့်နွေးထွေးမှုကိုပေးလိမ့်မည်။ မိသားစုတစ်စုလုံးနှင့်အတူအရသာရှိရှိအရသာခံနိုင်ခြင်း လှပသောလေထုနှင့်အမှတ်တရများဖန်တီးရန်၊ လွယ်ကူစွာအရသာရှိပြီးအရောင်များကိုပြင်ဆင်ရန်။ များသောအားဖြင့်စူပါမားကက်များတွင်ပေါက်ကွဲသောပူပြင်းသည့်ချောကလက်ပြုလုပ်ခြင်းနည်းလမ်း၊ ရိုးရှင်းသော်လည်းအရသာရှိသောပါဝင်ပစ္စည်းများ•ချောကလက် (အမှောင်၊ နို့) 200 ဂရမ်•မတ်ရမီလို ၁၀၀ ဂရမ်•နို့ချိုင့် (သောက်ရန်အတွက်စိုက်ခင်းလုပ်ကိုင်ရန်အတွက်) 1 ခွက်တစ်ခုအဆင်သင့်ဖြစ်ပြီ၊ ချောကလက်ပူပြင်းတဲ့ဗုံးနဲ့သွားကြစို့။
2. ချောကလက်ကိုဆူအောင်အပူပေးပြီးအပူနည်းသောကြောင့်အရည်ပျော်ပါ။ ချောကလက်ကိုအလွယ်တကူအရည်ပျော်အောင်ပြုလုပ်နိုင်သည်။
3. တစ်ဆီလီကွန်မှိုကိုပြင်ဆင်ပါ၊ မလတ်ထားသောထောပတ်သို့မဟုတ်သံလွင်ဆီ ၁ လုံးကိုလိမ်းပြီးချောကလက်ကိုသွန်းလောင်းပါ။ ချောကလက်ကိုကျွန်ုပ်တို့ရွေးချယ်သောမှိုအရ Cube နှင့်ပုံသဏ္intoာန်အဖြစ်အအေးခံနိုင်ရန် ၁၀ မိနစ်ခန့်ရေခဲသေတ္တာထဲထည့်ပါ။ ၎င်းကိုပုံမှန်အားဖြင့်မြို့ပတ်ရထားပုံနှိပ်အဖြစ်အသုံးပြုသည်။ ဘာလို့လဲဆိုတော့မင်းကဖန်ခွက်တစ်ခုကိုထည့်ပြီးချစ်စရာပတ်ပတ်လည်ကိုကြည့်လို့ရတယ်
4. ချောကလက်ပုံသဏ္inာန်၌တည်ရှိ၏အခါ ဖြုတ်နှင့်ရေခဲသေတ္တာ။ ထို့နောက်မှိုကိုဖယ်ထုတ်ပြီးသုတ်ပြီးချောကလက်ထည့်ပါ။ ပမာဏလုံလောက်သည်အထိဆက်လုပ်ပါ။
5. ချောကလက်ခိုင်မာတဲ့အခါ ကျေနပ်လောက်သောနံပါတ်ရ အလယ်၌ marshmallow ထားပါ။ ထိုအခါထိပ်နှင့်အောက်ခြေချောကလက်သားညှပ်ပေါင်မု ကျန်ချောကလက်နှင့်အတူအုပ်စုခွဲလှည့်လည်ပိတ်ပါ။ လှပသောပတ်ပတ်လည်အသွင်သဏ္ဌာန်သို့ထွင်းထုခြင်း နောက်တစ်ခါရေခဲသေတ္တာထဲထည့်ပြီးလွယ်ကူပြီးအရေးအကြီးဆုံးကတော့ကလေးများသည်သူတို့မိသားစုနှင့်အတူလုပ်သောအလုပ်များကိုနှစ်သက်ပြီးပျော်မွေ့ကြသည်။ တကယ်တော့ပူပြင်းသည့်ချောကလက်ဗုံးကိုမည်သို့လွယ်ကူအောင်ပြုလုပ်ရမည်၊ မည်သူမဆိုယင်းကိုပြုလုပ်နိုင်သည်၊ သို့သော်မပြီးသေးပါ။ ဒီခရစ္စမတ်နဲ့နှစ်သစ်ကူးရာသီမှာချိုမြိန်မှုနဲ့နွေးထွေးမှုကိုဘယ်လိုပေါင်းစပ်နိုင်မလဲဆိုတာကြည့်ကြရအောင်။
7. ငါတို့ပြင်ဆင်ထားသောချောကလက်ဗုံးများထက်ပိုကြီးသည့်လှပသောခွက်တလုံးကိုပြင်ပါ။ ခရစ်စမတ်လေထုရဖို့ပါ အစိမ်းရောင်၊ တောက်ပသောအနီရောင်သို့မဟုတ်ပွဲတော်၏သင်္ကေတပါသည့်ဖန်ခွက်တစ်ခုကိုရွေးချယ်ပါ။ ထို့နောက်နို့ရည်ပူနွေးသောကြောင့်နို့ရည်အသစ်ကိုပြုတ်ပါ။ နို့ထွက်မလာမှီနွေးသောမီးခိုးထွက်လာသည်။ နို့ပူကိုချောကလက်ဗုံးထဲသို့လောင်းပါ။ နို့ပူသည်ချောကလက်ကိုတဖြည်းဖြည်းအရည်ပျော်သွားပြီးအရက်သောက်သောအခါအနံ့ထွက်လာလိမ့်မည်။ ချောကလက်၏နူးညံ့သောအရသာနှင့်ရော။ မွှေးသောနို့။ ဇွန်းကိုစားတဲ့အခါ Marshmallows ချိုမြိန်အရသာပြသပါလိမ့်မယ်။ ထိုအပျော့နှင့် chewy အရသာ စကားလုံးတိုင်းတွင်နွေးသောခံစားမှုတစ်ခုပေးသည်
8. အကောင်းဆုံးလက်ဆောင်များမှာအချစ်၊ နွေးထွေးမှုနှင့်မိသားစုတည်ရှိမှုဖြစ်သည်။ အားလပ်ရက်မှာပျော်ရွှင်စရာလှုပ်ရှားမှုများပြုလုပ်ပါ ချိုမြိန်သောအနံ့ကိုအမှတ်တရများပြုလုပ်ခြင်း ချောကလက်ပူပြင်းအောင်လုပ်နည်း ပျော်ရွှင်မှုအချိန်လေးများကိုတတ်နိုင်သမျှကာလပတ်လုံးမှတ်တမ်းတင်ရန်